Juventus oo ku dhaqaaqday tillaabo xumayn karta xiriirka ay la leedahay koox Yurub ah! (Maxaa dhacay?) – Gool FM
Juventus oo ku dhaqaaqday tillaabo xumayn karta xiriirka ay la leedahay koox Yurub ah! (Maxaa dhacay?)
(Paris) 02 Juunyo 2016 – Ma Coman cusub? PSG ayaa u muuqata koox aan sii haysan doonin 18-jirka hibada kubadeed leh ee khadka dhexe Jonathan Nanitamo IKONE – kaasoo ay xod xodanayaan Tottenham iyo Manchester City – ayaa waxaa haatan qandaraas 3 sanadood ah ula diyaar ah Juventus.
Waa arrin u eg middii xiddig-yaraha bullaalay ee Kingsley Coman, yeelkeede sida uu werinayo warqaadka L’Equipe, waxay tillaabadan oo lagu tibaaxay ugaarsi sharci darro ihi ay kharaarayn kartaa xiriirka Juve iyo PSG.
Waayo kooxda PSG waxay wiilkan u aragtaa hanti muhim ah, waxaana la barbar dhigaa Brahimi: waa gur misna ka ciyaari kara midigta, sidoo kale kalana kasoo muuqan kara weerar seddexleey ah.
SAWIRRO: Xulka Talyaaniga ee dhowaantan la magacaabay oo sawirro bandhig ah galay!
QIIMAYNTA FIFA: Sidee u kala horreeyaan xulalka adduunku? (Somalia halkee gashay?)